သုံးယောက်ပေါင်းရေးမှ တစ်အုပ်ထွက်မယ့် Jonas Brothers တို့ရဲ့ Memoir
29 May 2019 . 4:21 PM
ပရိသတ်ကြီးတို့တော့ဘယ်လိုထင်လဲမသိပေမယ့် ဖတ်ဖူးသမျှကြားဖူးသမျှ Memoir တွေကမှာတော့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်က သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းလိုမျိုး ၊ အတ္ထုပတ္တိလိုမျိုးရေးတာပေါ့နော်။ ဘယ်လိုနေနေပါ နာမည်ကြီး Jonas Brothers တွေကလည်း သူတို့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို Memior တစ်အုပ်ထုတ်တော့မယ်တဲ့။
သူတို့သုံးယောက်ရဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းကို ပုံဖော်ပြီးတော့ရေးမယ့် Memior လေးရဲ့နာမည်က Blood တဲ့။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာအဓိကပါမှာတွေက သူတို့ရဲ့ Jonas Brothers Band ဘယ်လိုဖြစ်လာတာ ၊ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေနဲ့ ၂ဝ၁၃ မှာ သူတို့အဖွဲ့ကွဲသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ၊ ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်မှာ သူတို့သုံးယောက်ပြန်လှန်ပေါင်းစည်းပြီးဇာတ်သိမ်းမယ်ပေါ့နော်။ စာအုပ်ကတော့ နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှထွက်မှာဆိုပေမယ့် ကြိုတင်ပြီးတော့စာရင်းပေးဝယ်လို့တောင်ရနေပါပြီတဲ့နော်။
Nick Jonas ရော ၊ Joe Jonas ရော လတ်တလောမှ မင်္ဂလာဆောင်သွားကြတာတွေရော ၊ သုံးယောက်ပေါင်းပြီး Hit Single နှစ်ပုဒ်ထွက်ထားတာတွေရော ၊ အယ်လ်ဘမ်အသစ်ထွက်မှာနဲ့ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေမှာတွေနဲ့ Behind-the-scenes-documentary တွေရော စုံစိနေအောင်လုပ်ပြီး စီးပွားရှာပြီးပြီဆိုတော့ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စာအုပ်ထုတ်ဖို့ပဲကျန်တော့တာပေါ့။ ဒီလောက်အလုပ်များနေချိန်မှာ အချိန်တိုလေးအတွင် ဘယ်လို Memoir ရေးမယ်ဆိုတာတော့ မသိပေမယ့်လို့ Blood အတွက် ကူရေးပေးမယ့် Co-Author တော့ရှိနေပါတယ်နော်။ Mötley Crüe ရဲ့ The Dirt စာအုပ်ကိုကူရေးပေးခဲ့တဲ့ Neil Strauss က Jonas Brothers တွေထုတ်မယ့် Memior ရဲ့ Co-Author ပါ။
သူတို့ရဲ့ဒီနှစ်နွေက အမှန်တကယ် အလုပ်များမယ့်နွေပါ။ သူတို့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်အသစ် Happiness Begins က ဂျွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာထွက်မယ် Documentary က ၈ျွန်လ ၄ ရက်နေ့မှာထွက်မယ်။ Joe Jonas ကတော့ သူတို့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ဆိုရင် သူတို့ကအောင်မြင်မှုကိုတောင် ဖမ်းဆုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့်အခုတော့အောင်မြင်နေပြီလေတဲ့။ ဒါကြောင့်သူတို့ အနုပညာရှင်အနေနဲ့ရော လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော မိသားစုတစ်စုအနေနဲ့ပါ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို သူတို့နဲ့အတူ အစကနေရှိနေခဲ့ကြတဲ့သူတိုင်းကို ပြောပြချင်လို့ စာအုပ်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
ဒီတော့မေးစရာရှိတာက နောက်ဆိုရင် သုံးယောက်ပေါင်းပြီး ဒီ Memior ကိုပဲ Audiobook ထုတ်ကြဦးမှာလား။ ရေးရင်ရော တစ်ယောက်တစ်ပိုင်းရေးမှာလားဘာလားပေါ့။ ပရိသတ်ကြီးတို့ရော စာရေးသူတွေးသလိုတွေးမိလား။
Photo Credit: Hollywood Reporter, Instagram
by Ngul Ciin . 25 mins ago